Khabiirka Kubada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Faah Faahin Buuxda Ka Bixiyay Heshiiska Ay Barcelona Ku Doonayso Philippe Coutinho. – GOOL24.NET
Khabiirka Kubada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Faah Faahin Buuxda Ka Bixiyay Heshiiska Ay Barcelona Ku Doonayso Philippe Coutinho.
Waxaanu saaka idiin soo gudbinay qoraal ay shirkada qalabka sportska ee Nike ku daabacday webisteka rasmiga ah ee shirkeeda kaas oo lagu sheegay in Philippe Coutinho uu diyaar u yahay ku biirista Camp Nou waxaana loo arkayay in shirkada Nike ay si aan ugu talogal ahayn warkan ku sii shaacisay, laakiin khabiirka kubbada cagta Spain iyo Sky Sports ee Guillem Balague ayaa markiisa ka war bixiyay halka uu marayo heshiiska ay Barca ku doonayso Coutinho.
Guillem Balague ayaa bartiisa twitterka ku faah faahiyay xaalada Coutinho iyo sida ay ilaa hadda u taagan tahay isaga oo inta badan ka duwan waxa ay qoraan saxaafada Catalonia iyo Spain. Guillem Balague ayaa biyo qabow ku shubay wararka haddaba sheegaya in Coutinho uu maalmaha soo socda noqon doono ciyaartoy Barca wuxuuna cadeeyay in Barcelona ayna wali gudbin dalab rasmi ah.
Guillem Balague ayaa cadeeyay in marka ay Barcelona gudbiso dalabka rasmiga ah la ogaan doono halka ay Liverpool taagan tahay wuxuuna sheegay in aan hadda la ogaan karin haddii ay Liverpool wax ka badashay halkii ay suuqii xagaaga ka taagnayd bixitaanka Coutinho.
Guillem Balague oo ka hadlaya xaalada Coutinho ayaa yidhi: “Ma jiro wax kulan ah oo dhexmaray Coutinho iyo Barcelona, kooxda kubbada cagta Barcelona wali wax dalab cusub ah may gudbin, kooxda kubbada cagta Liverpool wax qiimo ah may dul dhigin isaga. Ma jiro wax balan qaad ah oo ay Liverpool isaga u samaysay si ay hadda u iibiso, Liverpool laguma qasbin in ay iibiso”.
Guillem Balague oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Maadaama oo ayna ilaa hadda Barcelona wax dalab ah gudbin, ma ogaan karno waxa uu noqon doono halka ugu danbaysa ee ay Liverpool taagan tahay, laakiin waxay u muuqdaan kuwo aad hadaf u leh. Ma jiro wax waligii ahi, markasta xal ayaa jira ayuu Klopp sheegay. Miyay qorshaynayaan in ay heshiis u sii gaadhaan xagaaga? oo ay u furan yihiin dalab qaali ah? Waxyaabuhu waxay kala cadaan doonaan marka ay kooxda kubbada cagta Barcelona dalabka dirto”.
Ugu danbayn Guillem Balague ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Kooxda kubbad cagta Barcelona waxay doonaysaa Griezmann iyo Coutinho, laakiin miyay labadooda wada bixin kartaa? Maya sida ay hadda u taagan tahay. Waxay u baahan yihiin in ay hadda ilaa xagaaga iska iibiyaa ilaa siddeed ciyaartoy si ay u soo yareeyan mushaarka wayn ee ah inka badan boqolkiiba 80% dakhliga, oo ay lacag u diyaarsadaan la soo wareegista”.
Xogta uu bixiyay khabiirka Sky Sports iyo kubbada cagta Spain ee Guillem Balague ayaa ah mid aad xaqiiqda ugu dhaw maadaama oo aan hadda si rasmi ah loo ogayn waxa ay noqon doonto falcelinta maamulka Liverpool marka ay hesho dalabka rasmiga ah ee Barcelona ay ku doonayso Coutinho.